1. Tsananguro yeRuzivo rweMunhu
Ruzivo rwakadzama nezvekushanya kwako kune webhusaiti uye zviwanikwa zvawakawana. Iyo Cookie inounganidza huwandu hweruzivo, senge IP kero, inoshanda sisitimu, uye bhurawuza yakashandiswa.
Zvichienderana nepeji rewebhu rakashanyirwa, mamwe mapeji anogona kunge aine mafomu anounganidza ruzivo nezvako, senge zita rako, kodhi yepositi, kero yeE-mail, nezvimwe.
Makuki anoshandiswa kukwidziridzira ruzivo rwewebsite yako zvinoenderana nekubatana kwako kwekare nesaiti. Iyo Cookie inotorwa uye inochengetwa neInternet browser kana webhusaiti ikawanikwa kekutanga. Ikoji yakachengetedzwa inoshandiswa pakushanya kunotevera kusimudzira kuona kwewebhu.
Iyo Cookie inogona kuvharirwa kana kudzimwa muzviitiko zvakadaro pausingabvumirane nekuva neKuki. Nekudaro, nekuita kudaro, webhusaiti yacho inogona kutakura, kana mamwe mabasa ewebhusaiti anogona kusashanda nemazvo, nekuda kwekuvharirwa kweKuki.
Ongorora: Parizvino, hapana maKuki anoshandiswa pane webhusaiti yedu anotora ruzivo runogona kushandiswa kukuzivisa iwe pachako.
Maitiro ekugadzirisa uye kudzima Cookies
Cookies anogona kuvharirwa kana kudzimwa kuburikidza nebrowser "Setup" (kana "Chishandiso") marongero. Imwe sarudzo ndeyekutambira kana kuramba maKuki ese. Sarudzo yechipiri kugamuchira makuki akasarudzika kubva kune mamwe mawebhusaiti. Iyo bhurawuza inogona kumisikidzwa kuti igadziriswe kuitira kuti igone kukuzivisa iwe pese paunogamuchira Cookie. Iwo manejimendi eKuki uye nzira yekuadzima anosiyana nemamwe mabhurawuza. Mabhurawuza ese anosiyana panguva ino. Kuti utarise kuti bhurawuza rako rinobata sei makuki, ndapota shandisa basa rekubatsira mubrowser yako.